Iifom ezingama-40 ze-HTML kunye ne-CSS zobhaliso lwe-akhawunti, iintlawulo kunye nokunye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba kukho into exhaphake kakhulu kulo naluphi na uhlobo lwewebhusayithi, ezi ziifom. Iifom esizisebenzisayo ukugcwalisa iinkcukacha zonxibelelwano, faka iinkcukacha zebhanki, ungene kwinethiwekhi yoluntu okanye wenze uphando olufana nolo siqhele ukwenza yonke imihla kwiinjini yokukhangela zikaGoogle.
Ke namhlanje siza kukubonisa Iifom ezingama-40 kwiCSS ukusukela kwiifom zonxibelelwano, ukuphuma kwekhadi letyala, ukungena, kulula, ukubhaliswa okanye nokuqinisekiswa. Uthotho lweefom zobungangamsha obukhulu kunye nesitayile ukunika loo ndawo ikhethekileyo kwiwebhusayithi yakho, ngaphandle komxholo.
1 Ifom yoqhakamshelwano encinci
2 Ifom encinci
3 Ifom yoqhakamshelwano lweediliya
4 Ifom yoqhakamshelwano
5 Ifom yoqhagamshelwano eyandisiweyo
6 Ifom yoQhakamshelwano ye-UI
7 Ukuphuma kwekhadi lokuhlawula
8 Uyilo olucwangcisiweyo lwekhadi letyala
9 Ikhadi letyala le-UI
10 Phendula ukuphuma
11 Ikhadi lokuhlawula lokuphuma
12 Intlawulo yekhadi letyala
13 Ikhadi letyala
14 Inyathelo ngenyathelo kwifom
15 Ifom yokusebenzisana
16 Inyathelo ngenyathelo kwifom
17 Inyathelo ngesinyathelo
18 Amanqanaba amaninzi kwifom yeJquery
19 Ifom yoopopayi ye-UI
20 Ukwenza iakhawunti / ifom yokungena
21 Ukuqaqanjelwa yinyoka
22 Isikrini sokungena
23 Uyilo lwe-UI yokungena
24 Ukungena kunye ne-UI yokudala iakhawunti
25 Iimpazamo ezingathandekiyo
26 Ngena kwi-CSS ye-CSS
27 Ifom yokungena ngemvume
28 Ifom flexbox
29 Ibhokisi yoopopayi
30 Indawo yokukhangela
31 Indawo elula yokukhangela ucofe kuyo
32 Isiphumo sokufakwa kombhalo kweCSS
33 Ukukhangela kwesikrini esipheleleyo
35 Akukho mibuzo
36 Ifom yobhaliso oluvelayo
37 Ibhokisi yokubhalisela i-UI
38 Ibhokisi yokubhaliselwa ye-CSS
39 Ibhokisi yokubhalisela
40 Ifom yokuqinisekisa ye-EMOJI
Ifom yoqhakamshelwano encinci
Okunye ifom encinci, nangona ikwiCSS kuphela ukuba ibe ifom elula kunye nefuthe eliphezulu. Ayinazo oopopayi abancinci zangaphambili, kodwa izalisekisa injongo yayo kakuhle.
Ifom yoqhakamshelwano lweediliya
Ifom yoqhakamshelwano lweediliya, Uyilo oluhle kakhulu. Ukuphendula ngezo webhusayithi ukubonwa kwiselfowuni, nangona ingabandakanyi ukuqinisekiswa.
Este Unxibelelwano ineopopayi obunomdla: ileta iyenziwa. Elula, kodwa iluncedo kakhulu kwimibala emininzi.
Ifom yoqhagamshelwano eyandisiweyo
Este ifom yoqhakamshelwano eyandisiweyo Isiphelo sangaphambili kuphela kwaye sinefayile ye- ukungqinisisa ngejQuery. Sinqakraza kwiqhosha elidadayo kwaye ifom iya kuvela kunye nophiliso oludlamkileyo. Ebalaseleyo.
Ifom yoQhakamshelwano ye-UI
Ifom yoQhakamshelwano ye-UI Yifom eyenziwe kwi-HTML nakwi-CSS. Iyabonakala ngokuba yiyo ikhadi loqhakamshelwano elilula Sinokugcwalisa ukuze indawo yokubhaliweyo kuphela itshintshe xa ucofa.
Ukuphuma kwekhadi lokuhlawula
Uyilo olucwangcisiweyo lwekhadi letyala
I-CSS emsulwa kwifayile ye- ukuphuma kwe amakhadi etyala ngemibala ethe tyaba. Imibala kwaye ilula kakhulu ekwaziyo ukubonisa umgangatho kunye nobungcali.
Ikhadi letyala le-UI
Phendula ukuphuma, yenziwe ngeReact.js, yahlulwe ngu umfanekiso osecaleni esinokuwenza ngokwezifiso ngeenkonzo okanye iimveliso esizithengisayo kwi-eCommerce yethu.
Ikhadi lokuhlawula lokuphuma
Olu phumo lubonakala lubeka umfanekiso kwikhadi. A ifom elula necacileyo eyenziwe nge-CSS3, HTML5 kunye ne-jQuery encinci. Umgangatho ophezulu kwaye wahlukile kwezinye ekuphumeni kolu luhlu. Unokuzikhuphelela apha ukuphuma kwekhadi lokuhlawula.
Intlawulo yekhadi letyala
Inhle ukuphuma kwentlawulo yekhadi eyahlukileyo kwezinye kwaye isekwe kwi ikhadi lamatyala elibekwe phezulu ke apha ngezantsi sinayo yonke le fomu inedatha eyahlukileyo ekufuneka umxhasi ayigcwalise ukwenza intlawulo kwi-eCommerce.
Inyathelo ngenyathelo kwifom
Este inyathelo ngenyathelo lefom ibonakala ngokuba nobuchule bokwenza izinto. Uya kuyiphendula imibuzo ukuze ubuyele kubo nangaliphi na ixesha ngokubonakala kwiscreen ngalo lonke ixesha.
Amanqanaba amaninzi kwifom yeJquery
Ukuba unayo ifomu ende kakhulu, oku kulungele amacandelo ahlukeneyo anebar yenkqubela phambili. Ngokusekwe kwi-jQuery kunye ne-CSS, ime ngaphandle kuyilo lwayo kunye nobuhle obukhulu.
Ifom yoopopayi ye-UI
Utshintsho koku Ifom yoopopayi ye-UI banjalo esekwe kuDomink Marskusic. Ukuqwalaselwa kwesiphumo sebhokisi ebhokisini ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka xa sicofa amanye amacandelo amabini okungena okanye ukungena ngemvume.
Ukwenza iakhawunti / ifom yokungena
Ukuqaqanjelwa yinyoka lolunye lolona phawu lukhangelekayo kulo naluphi na uluhlu imele oopopayi abahle Oko kubonakala ngokukhawuleza mzuzu xa sicofa kwelinye lamacandelo amabini.
Yenza olu loyilo yokungena kwesikrini banjalo ke nabo oopopayi kunye nendlela eyile ngayo. Ukuba ufuna ukuba ngoyena uphambili ngoku xa kusiziwa kuyilo lwewebhu, le fomu ayinakuphoswa. Ibalulekile.
Uyilo lwe-UI yokungena
Yenzelwe ukusebenzisa i-HTML, iSass, kunye ne-jQuery. Uyilo lwe-UI yokungena es eisemthethweni kwaye icacile ngesihloko esingasweleyo oopopayi ezifihlakeleyo ukuze ube yenye yeentandokazi kuluhlu.
Ukungena kunye ne-UI yokudala iakhawunti
Iimpazamo ezingathandekiyo Kukungena ngemvume okuhle ngenxa yoopopayi be amasimi ane-obnoxious.css. Eyokuqala ukuba ibe kukuzonwabisa, ukungakhathali kunye nokungena okungafaniyo. Yoqobo ngaphandle kwamathandabuzo kwiwebhusayithi yethu.
Ngena kwi-CSS ye-CSS
Ukungena ngemvume okunomdla ngemifanekiso eyahlukeneyo ezibonisa intsimi nganye yokusa undwendwe naphina apho sifuna khona. Imibala ekhethwe kwimibala nayo iyabonakala. Ayinayo nayiphi na imifanekiso. Yenziwe kwi-HTML kunye ne-CSS ukuyiphumeza kwiwebhusayithi yomthengi okanye eyethu.
Ifom yokungena ngemvume
Este Ifom yokungena ngemvume iphefumlelwe lulwimi lwe uyilo olwaziwa ngoYilo lweZinto. Siyibonile kwizicelo ezininzi kwizixhobo eziphathwayo. Kule khowudi sinepaneli yokungena kunye nepaneli yokubhalisa efihliweyo ngokungagqibekanga. Iphaneli yobhaliso inokusebenza ngokunqakraza kwikholamu ebhulowu ekwicala lasekunene. Inopopayi olukhulu ukuba lube lilungu elikhetheke kakhulu nelinomtsalane.
Siqala iifom zokukhangela ngale nto imo ngokusekwe kwiflexbox. Imile ngombala obomvu we «ukukhangela» kunye nokuncinci ngakumbi kwicandelo lokukhangela elihle kwiwebhusayithi yakho.
Omnye umgca omkhulu uhamba ngaphaya kwesikrini ukuze xa siyicinezela siqale ukuthayipha ukukhangela. Iqhosha lokuthabatha ukuchaza oku ifom elula yokukhangela.
Indawo elula yokukhangela ucofe kuyo
Indawo elula yokukhangela ucofe kuyo isekwe kunxibelelwano olubonwe kwi iNkqubo yoLuntu yokuqhuba iWaze kwezithuthi. Zonke ii icon kunye nemifanekiso zenziwe nge-CSS. Igqamile yeempawu ezisivumela ukuba senze uphando oluthile kwimveliso okanye ngenkonzo. Ukuqhayisa ngenxa yokuba kupholile.
Isiphumo sokufakwa kombhalo kweCSS
Isiphumo sokufakwa kombhalo kweCSS kubandakanya uthotho lwe oopopayi kwisicatshulwa nakwidrawer yokukhangela ukuba ngumkhangeli ngononophelo kwifom.
Ukukhangela kwesikrini esipheleleyo
Olu ngeno luvela ukukhangela kwesikrini esipheleleyo isebenza ngalo naluphi na uhlobo lobeko okanye isikhundla. Ifuna izimbo isikhongozeli esithile kunye nezinto zokukhangela ngaphezulu ukubekwa kwingcambu. Iphawulwa ngoopopayi abangqangayo ngalo mzuzu sicofa iqhosha lokukhangela.
Un ifom yokukhangela ilula loo nto uthanda ukudlala ngezikhundla ezahlukeneyo kunye noopopayi. Cofa kwiqhosha lokukhangela kwaye idrowa epheleleyo ibonakala ichwetheza amagama. Okwangoku kwaye kucetyiswa kakhulu ukuba kulula kangakanani.
Akukho mbuzo es ifom elula enendawo yokubhaliweyo kunye nenketho yokukhetha ezinye zeempendulo ukuze umsebenzisi azikhethe. Umsebenzi omkhulu ngokubonakalayo ukuba ungoyena ubalaseleyo.
Ifom yobhaliso oluvelayo
Ngale nto ifom yobhaliso popup, sicofa kwiqhosha lokudada kwaye liza kusisa ifom enetoni ehlekisayo kunye nomhlaba oza kungenisa kuwo i-imeyile. Ukugqibelela kwentengiso ye-imeyile.
Ibhokisi yokubhalisela i-UI
Omnye ibhokisi yomrhumo ngentsimbi yealam kunye ngaphezulu kwemibala ethe tyaba Kuyilo.
Ibhokisi yokubhaliselwa ye-CSS
Omnye ibhokisi yokubhalisela smart yenyani ye sebenzisa iigradients yeqhosha lokurhuma njengombala omfusa wasentsimini.
Omnye ibhokisi yokubhalisa elula kodwa zisebenza kakuhle ngokuyila.
Ifom yokuqinisekisa ye-EMOJI
Eyona nyulu CSS le ifom yokuqinisekisa ukwenza isitshixo okanye iphasiwedi. Njengoko sibhala, i-emoji iya kulinganisa inqanaba lokhuseleko lefom. Kuyahlekisa kwaye kunomdla ngaphandle kwamathandabuzo.
Ungaphoswa yile Uluhlu lweentolo ezingama-23 zoopopayi kwiCSS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » Iifom ezingama-40 ze-CSS ezingalahlekiyo nakweyiphi na iwebhusayithi
UJuan Jose Perez sitsho
Isampulu egqwesileyo yemizekelo eboniswe apha. Ukwahluka kunye nokuziqhelanisa nemixholo eyahlukeneyo kwaye eyona nto intle kukuba ikhonkco lesihloko ngasinye libandakanya idemo kunye nekhowudi yemithombo nangona kufanele ukuba uyiqaqambise ngeqhosha «Jonga idemo» kuba yayikukuthanda ukwazi ukuba ndiyifumene kwisihloko . Enkosi ngegalelo. Imibuliso evela eCaracas.
Phendula kuJuan Jose Perez
Ubugcisa esitratweni: xa amehlo ewela iindonga